काठमाडौ । धेरै समलिङ्गी पुरुष र महिलाले विपरीत लिङ्गीका मानिसहरूसँग विवाह गर्छन्। कोही बाध्यताले त कोही समाजको डरले यो कदम उठाउँछन् । तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा के हुन्छ जब उनीहरूको वैवाहिक जीवन सुरुवातमा वा मध्यतिर एक अर्कालाई आफ्नो बास्तविकता बारे थाहा हुन्छ । अवश्य घर बिग्रिन्छ । धेरैको यसरी बिग्रिएकोपनि छ ।
भर्खर हामीले समलिङ्गी पुरुषहरूको बारेमा सुनेका थियौं जसले महिलालाई विवाह गरेपछि सत्य खुलेको थियो । हामीले पाठकहरूको असाध्यै प्रतिक्रियाहरू पायौं, जो यस वास्तविकताको पक्षमा अरु पर्दाफास गर्न हामी तत्पर भयौँ । यसको मतलब जसको पत्नीहरू वा श्रीमानहरू विवाह पछि समलिङ्गी हुन् भन्ने खुल्छ त्यसपछि के हुन्छ ? यो वास्तविक घटनामा केही खुल्दैछ । अन्तिमसम्म पढ्नुहोला ।
ती मध्ये एक एम्मा हुन् जसले एक वर्ष अघि आफ्नो पति समलिङ्गी हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइन। एम्मा भन्छिन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारे कुनै पनि कुराले उनीहरु समलिङ्गी हुन् भन्ने छुट्टिने रहेछ । आफुलाई कुनै न कुनै क्षण यी पक्का समलिङ्गी जस्तो लाग्छ। त्यसैले उनीहरूले कुनैपनि बेला आफ्नी पत्नी वा पतिलाई छोडेर उनीहरुको जीवनमा जान सक्दछन्। तर तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईको सम्पूर्ण जीवन त्यही बेला बर्बाद भयो ।
सबै भन्दा गाह्रो कुरा तपाईको पुरानो जीवनसाथीलाई सम्पूर्ण रमाईलोको साथ सम्बन्धबाट छुट्टि मनाएको देख्नु हो। तिनीहरूले कसरी पछाडि विनाश निम्तियो । या मैले को–कसालाई प्रभाव पारे भन्ने कुराको उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। जब मैले मेरा पति समलिङ्गी भएको थाहा पाए त्यसपछि उनी आफ्नो संसारमा गए । तर मसँधैका लागि दुखको पोखरीमा रहे ।
४३ बर्षको क्यारोलको पनि त्यस्तै अनुभव छ। उनका पूर्व पति अब समलिङ्गीहरूको अधिकारका लागि काम गर्दछन्। उनले एक सन्देश देखी जुन उनका पतिलाई एक प्रेरणा र रोल मोडेलको रूपमा वर्णन गरिएको थियो। उनी भन्छिन्, ममा धेरै चिन्ता थियो कि कसैले उहाँमा यी दुई गुणहरू देख्न सक्यो, जब उहाँ मेरो र मेरो सम्बन्धमा झूट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो।
म समलिङ्गी हैन भनेर दावी गर्नुहुन्थ्यो । तर मैले प्रमाण फेला पारिसकेकी थिए । क्यारोलका अनुसार उनले समलिङ्गीको रूपमा स्वीकार गर्न असफल भएर हाम्रो परिवारलाई ध्वस्त पारे। किनकी उनले समलिङ्गी हुँदा हुँदै मसँग विवाह गरे । यसैले मलाई उनीप्रति गर्व गर्ने केही कुरा छैन।
उनीहरूले सन् २००३ मा विवाह गरेका थिए र उनीहरूका दुई बच्चा छन्। उनी धेरै खुसी थिईन्, तर उनले केही गलत भएको संकेत पाउँथिन् । उनको श्रीमानको कम्प्युटर रेकर्डमा समलिङ्गी रहेको शंका गर्ने प्रमाणहरु भेटिए । सन् २००९ मा आएर उनका पतिले उनलाई बताएकी उनी दोलिङ्गी हुन् । उनी दुबै लिङ्गीसँग बराबर रमाउँथे ।
क्यारोल भन्छिन् कि उनले यस कुरालाई स्वीकृति दिइनन् तर उनी आफैंले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न चाहने व्यक्तिका कारणले नै कुनै बाटो पत्ता लगाउन सक्ने महसुस गरे र समलिङ्गीलाई पहिलो बनाउँने रोजे । यसैले मलाई छोडेर उनी समलिङ्गी पार्टनरसँग बसे ।
केरोल भन्छिन् एक दिन उनी घर आए। उनले भने कि उनी समलिङ्गी थिए र घर छाडे। मलाई लाग्यो मेरो सारा संसार चकनाचूर भयो तर उनी फेरि आए र भने, हामी बच्चाको खातिर सँगै बस्न चाहन्छौं। मलाई थाहा छ मैले के गर्नुपर्दैन, त्यसैले झूटको सहयोगमा हामी दुई वर्ष बस्यौँ । अरूको लागि हामी सामान्य खुसी दम्पती थियौ ।
तर आफ्नो भित्री कुरामा भने हैन । हामी सम्झौतामा नै केही बर्ष वितायौँ । तर सम्झौताको जीवनसँधै रहन सकेन र दुबैको सम्बन्धविच्छेद भयो। उनी भन्छिन् कि उनले बताएको झुटमा उसको लागि सब भन्दा ठूलो समस्या थियो।
उनको श्रीमानसँग परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो अवसर थियो, तर सबै कुरा उनलाई द्रुत रूपमा भयो। उनको श्रीमान्को अब एक केटा मान्छे संग विवाह भएको छ। उनी भन्छिन्, यो पार गर्न मलाई धेरै समय लाग्यो। यो मेरोलागि विश्वासको कुरा थियो। अरू कसैलाई म कसरी विश्वास गर्न सक्छु ? भन्थे तर जिते । बीबीसी